Ireo lafin-javatra lehibe indrindra amin'ny fampiroboroboana fampandrenesana fampiharana finday mahomby. Martech Zone
Ireo lafin-javatra lehibe indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fampandrenesana finday fampiharana mahomby
Alatsinainy, Jolay 5, 2021 Alatsinainy, Jolay 5, 2021 Max Sudyin
Tapitra ny fotoana izay namokarana atiny lehibe dia ampy. Ekipa fanontana izao dia tsy maintsy mieritreritra ny fahombiazan'ny fizarana, ary ny fandraisana anjaran'ny mpihaino no lohalaharana.
Ahoana no ahafahan'ny fampiharana haino aman-jery mampiditra (sy mitazona) ny mpampiasa azy? Ahoana no ny ny metrika dia ampitahaina amin'ny salan'isan'ny indostria? Pushwoosh dia nanadihady fanentanana fampandrenesana fanentanana ho an'ny mpampahalala vaovao miisa 104 ary vonona hanome valiny anao.
Inona avy ireo fampiharana haino aman-jery mirotsaka indrindra?
Avy amin'ny zavatra hitantsika tao amin'ny Pushwoosh, ny metatra fampandrenesana fanosehana dia mandray anjara betsaka amin'ny fahombiazan'ny fampiharana haino aman-jery amin'ny fidiran'ny mpampiasa. Ny tato ho ato manosika fikarohana benchmarks fampandrenesana nanambara:
Ny salanisa tahan'ny click-through (FNT) ho an'ny fampiharana haino aman-jery dia 4.43% amin'ny iOS ary 5.08% amin'ny Android
Ny salanisa tahan'ny opt-in dia 43.89% amin'ny iOS ary 70.91% amin'ny Android
Ny salanisa matetika ny fandefasana hafatra dia 3 manosika isan'andro.
Nanambara ihany koa izahay fa, farafaharatsiny, ny fampiharana haino aman-jery dia afaka mahazo:
12.5X ambony tahan'ny click-through amin'ny iOS sy 13.5X CTR avo kokoa amin'ny Android;
1.7X ambony tahan'ny opt-in amin'ny iOS sy ny 1.25X ambony indrindra amin'ny Android.
Mahaliana fa ny fampiharana haino aman-jery miaraka amin'ny refy fampiroboroboana ny mpampiasa avo indrindra dia manana hatrehana fampandrenesana fanosehana mitovy: mandefa tsindry 3 isan'andro izy ireo, toy ny salanisa ihany.
8 Zava-misy izay mitaona ny fifandraisana amin'ny mpampiasa finday
Ahoana no ahombiazan'ny fampiharana haino aman-jery mitarika ny mpamaky azy fa mandaitra? Ireto ny teknika sy fitsipika namafisin'ny fandalinana Pushwoosh.
Laharana 1: Ny hafainganan'ny vaovao nampitaina tamin'ny fampandrenesana fanosehana
Ianao no te ho voalohany handre ny vaovao - misy dikany tanteraka izany, fa ahoana no hiantohana azy?
Ampiasao ny hafainganam-pandeha fampandrenesana manosika teknolojia hanaterana fampandrenesana vaovao 100X haingana kokoa noho ny salan'isa
Avy amin'ny zavatra niainantsika, rehefa manafaingana ny fandefasana fampandrenesana fanosehana azy ireo ny haino aman-jery Ny CTR dia mety hahatratra 12%. Ity dia farafahakeliny indroa amin'ny salan'isa nambaranay tamin'ny fandalinana data.
Mandrosoa ny dingana fanovana amin'ny fandefasana fampandrenesana fanosehana
Hamarino tsara fa haingana sy tsotra ny fampiroboroboana ny atiny amin'ny alàlan'ny fanosehana na iza na iza ao amin'ny ekipa fampiharana media anao. Safidio ny rindrambaiko fampandrenesana fanosehana izay mamela ny fizarana vaovao sy ny longreads ao anatin'ny iray minitra - tsy fantatrao ny fomba kaody. Mandritra ny herintaona dia afaka mamonjy anao fito andro fiasana feno izy!
Factor 2: Prompt opt-in natokana ho an'ny fampandrenesana fanosehana
Ity misy fika tsotra iray: anontanio ny mpihaino anao izay lohahevitra te hampandre azy ireo izy ireo fa tsy hanontany raha te handray misy fampahatsiahivana amin'ny ankapobeny.
Eo an-toerana dia hiantoka ny tahan'ny opt-in ambony amin'ny fampiharana anao izany. Manaraka izany, ity dia hamela fizarazaran-tsarimihetsika bebe kokoa sy tanjona kendrena. Tsy mila manontany tena ianao raha misy ifandraisany ny atiny atolotray - ny votoatin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ihany no ho azon'ny mpamaky! Vokatr'izany dia hitombo ny refin'ny fifandraisanao sy ny fitazonana anao.
Ireto ambany ireto misy ohatra iray mahazatra momba ny famandrihana famandrihana aseho amin'ny fampiharana CNN Breaking US & World News (eo ankavia) sy ny fampiharana USA Today (eo ankavanana).
Mitandrema ihany anefa: raha te hitombo a voazarazara tsara fototry ny mpampiasa nisafidy, mety tsy tianao ny manitatra ny lisitry ny mpisoratanao fampandrenesana amin'ny fomba rehetra.
Ny fandalinana ny angon-drakitra Pushwoosh dia naneho fa ny taha ambony amin'ny opt-in dia tsy antoka ho an'ny fifandraisan'ny mpampiasa ambony amin'ny fifandraisanao.
Ilay entina ve? Ny fizarana no lakilena, ka ndao hitoetra ao aminy.
Antoka 3: Fampandrenesana manosika ny mpampiasa fampandrenesana
Mba hampitomboana ny fandraisan'anjaran'ireo mpihaino azy ireo dia ampiasain'ny fampiharana haino aman-jery mpitarika ny fampandrenesany arakaraka ny toetran'ny mpampiasa (taona, firenena), ny safidin'ny famandrihana, ny fanjifana votoaty taloha, ary ny fitondran-tena amin'ny fotoana tena izy.
Raha ny fanandramana anay dia toy izao ny fitomboan'ny mpitory sasany ny CTR hatramin'ny 40% ary hatramin'ny 50%.
Antoka 4: Fanamafisana ny fampandrenesana an-tsokosoko
Manampy ny fizarana ianao fantaro ny tombotsoan'ny mpamaky anao. Manampy ny personalization, mandritra izany fotoana izany ny mpihaino anao fantaro ny fampiharana ny haino aman-jery ataonao.
Ataovy miavaka ny singa rehetra amin'ny fampandrenesana fampidirana haino aman-jery mba hahamarika anao - manomboka amin'ny lohateny ka hatrany amin'ny feo manamarika ny fandefasanao hafatra.
Singa fampandrenesana fanindriana izay azo anaovana manokana
Manampia fikitika ara-pientanam-po amin'ny emojis (raha ilaina) ary ampifanaraho amin'ny alàlan'ny fanoratana azy ireo amin'ny anaran'ny mpampiasa azy ireo tolotra famandrihana. Miaraka amin'ny atiny mavitrika toy izany, ny fampandrenesanao manosika dia mety hahazo fisondrotana 15-40% amin'ny CTR.
Ohatra iray amin'ny fanosehana manokana azonao alefa amin'ny rindrambaiko media
Factor 5: Manondro ny fotoana fampandrenesana Push
Araka ny antontan'isa izay nakarinay tao Pushwoosh, ny CTR avo indrindra dia miseho isaky ny talata, eo anelanelan'ny 6 sy 8 hariva ny ora eo anelanelan'ny mpampiasa. Ny olana dia tsy afaka manao fandaharam-potoana fampandrenesana rehetra momba izany fotoana marina izany ny fampiharana haino aman-jery. Matetika, ny editorial dia tsy afaka mamolavola ny fanairana fanairana mialoha azy ireo akory - tsy maintsy mampita ny vaovao izy ireo raha vao misy izany.
Ny azon'ny fampiharana haino aman-jery rehetra atao anefa dia ny mamantatra ny fotoana anaovan'ny mpampiasa azy fatratra ny fikitihana ny fampandrenesana ary manandrana mamoaka hevitra sy mamaky fotoana lava avy eo. Torohevitra vitsivitsy hahombiazana:
Diniho ny faritry ny fotoana ananan'ny mpamaky anao
Mametraha ora mangina mifanaraka amin'izany
Ny zana-potoana sy endrika andrana A / B dia natolotra
Anontanio mivantana ny mpihaino anao - toy ny fampiharana SmartNews izay mandray ny mpampiasa vaovao amin'ny alàlan'ny famandrihana famandrihana manontany rehefa aleon'izy ireo mahazo tsindry
Toy izao no ahafahan'ny rindran-tserasera haino aman-jery hamaha ny olana amin'ny fampandrenesana tsy misy fotony sy tsy voafetaka, mampihena ny opt-outs ary mampitombo ny fifandraisan'ny mpampiasa.
Factor 6: Frequency fampandrenesana push
Arakaraky ny fanosehana ny fampiharana haino aman-jery no mampidina ny CTR ambany - ary ny mifamadika amin'izany: mino ve ianao fa marina ity fanambarana ity?
Ny fandalinana ny angon-drakitra Pushwoosh dia nanambara fa ny fahamaroan'ny fampandrenesana ny tsimok'aretina sy ny CTR dia tsy miankina amin'ny tsirairay - fa kosa, misy ny fifandraisana mihombo eo amin'ireo metrika roa ireo.
Ny fikafika dia ireo: mpanonta kely kokoa handefa fanerena faran'izay kely indrindra isan'andro - amin'ny tranga maro, tsy afaka mahazo CTR avo izy ireo satria tsy nahazo fahatakarana ampy momba ny safidin'ny mpihaino. Ny mpitory lehibe kokoa, ny mifanohitra amin'izany, matetika dia mandefa fampandrenesana manodidina ny 30 isan'andro - nefa, mijanona ho mifandraika sy mahasarika.
Raha ny fahitana azy dia zava-dehibe ny fahita matetika, saingy tsy maintsy manandrana ianao mba hahitana ny isan'ny tolotra isan'andro mety ny fampiharana media
Voamarikao ve fa ny CTR dia mazàna avo kokoa amin'ny Android noho ny amin'ny iOS? Izany dia miankina amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny sehatra UX.
Amin'ny Android, hitan'ny mpampiasa kokoa ny tsindry: mijanona eo amin'ny tampon'ny efijery izy ireo, ary hitan'ny mpampiasa isaky ny misintona ilay vatasarihana fampandrenesana izy ireo.
Ao amin'ny efijery lock ihany no ahitanao ny bokotra iOS - rehefa voasokatra ny fitaovana dia miafina ao amin'ny foibe fampandrenesana ny fanosehana. Ary miaraka amin'ireo endri-javatra vaovao mametra fampandrenesana ao amin'ny iOS 15, fanairana maro no tsy hifantohan'ny mpampiasa.
Mariho fa ny isa ny mpamaky azonao ampiharina amin'ny fampandrenesana fanosehana amin'ny iOS sy Android dia tsy hitovy amin'ny firenena iray.
Any UK, ny isan-jaton'ny mpampiasa iOS dia nihoatra ny anjaran'ny mpampiasa Android tamin'ny volana septambra 2020 fotsiny, ary ankehitriny ny mpihaino ny sehatra finday dia saika mitovy.
Any Etazonia kosa, Ny mpampiasa iOS dia betsaka noho ny tompona fitaovana Android amin'ny stable 17%.
Midika izany fa amin'ny isa marobe, ny fampiharana haino aman-jery dia mety hampiditra mpampiasa iOS betsaka kokoa hiditra ao Etazonia noho ny any Angletera. Ataovy ao an-tsaina izany rehefa mampitaha ny refin'ny fifandraisanao amin'ny firenena samy hafa na ny benchmarking.
Factor 8: Fividianana vs Tweaks fampiroboroboana
Angona Pushwoosh mampiseho fa tampon'ny CTR raha toa ka manana 10-50K ny fampiharana haino aman-jery iray ary avy eo dia mpamandrika 100-500K.
Tamin'ny voalohany, nirongatra ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa rehefa nahazo mpividy 50K voalohany ny mpampahalala vaovao. Raha manohy mifantoka amin'ny fanitarana ny mpihaino ny fampiharana haino aman-jery dia milatsaka ho azy ny CTR.
Na izany aza, raha misy laharam-pahamehana amin'ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa noho ny fahazoan'ny mpampiasa azy ireo dia afaka mamerina ny CTR avo lenta izy ireo. Rehefa manangona mpamandrika 100K ny fampiharana haino aman-jery dia nanao lisitr'ireo fanandramana A / B izany ary nianatra tsara ny safidin'ny mpihaino azy. Ny mpampanonta iray dia afaka mampihatra fizarana fitondran-tena ankehitriny mba hampitomboana ny maha-zava-dehibe ny fampandrenesana nozaraina sy ny tahan'ny fifamatorany.
Iza amin'ireo teknika fampandrenesana fanosehana no hitazomana ny mpamaky anao?
Manana lisitry ny anton-javatra izay nampiroborobo ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny fampandrenesana fampandrenesana haino aman-jery 104 ianao. Inona avy ireo fomba hanaporofoana fa mahomby indrindra aminao? Ny fanandramana sy ny fitsapana A / B no hiteny.
Apetraho amin'ny fitsipika fizarazarana sy ny personalization ny paikadinao. Raiso an-tsoratra izay karazana atiny tena mahasarika ny mpamaky anao. Amin'ny faran'ny andro, ny fototry ny asa fanaovan-gazety amin'ny marketing amin'ny fampiharana haino aman-jery ihany koa - ny fanolorana fampahalalana sarobidy amin'ny mpihaino marina sy ny fihazonana azy ireo hirotsaka.
Pushwoosh dia sehatra mandeha ho azy marketing automatisation izay mamela ny fandefasana fanindriana fampandrenesana (finday sy fitety), hafatra ao anaty fampiharana, mailaka, ary fifandraisana misy eo am-pelatanan'ny hetsika multichannel. Miaraka amin'i Pushwoosh, orinasa 80,000 mahery eran'izao tontolo izao no nanatsara ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa, ny fitazonana azy ary ny sandan'ny androm-piainany.
Makà Demo Pushwoosh
Tags: Androidhafatra ao anaty fampiharanaiOSiOS vs androidfinday fampiharanafandraisana an-tanana ny fampiharana findayfandefasana hafatra amin'ny findayfampandrenesana ny fampiharana findayfampandrenesana manosikafampandrenesana fanosehana ctrmanery ny antony fampandrenesanamanosika matetika ny fampandrenesanatsindrio ny tahan'ny opt-in fampandrenesanamanosika fanamafisana fampandrenesanamanosika ny fandaharana fampandrenesanatsindrio ny fampandrenesana fampandrenesanamanosika hafainganana fampandrenesanamanindry statistikan'ny fampandrenesanamanindry ny fotoana fampandrenesanaPushwoosh
Max no mitarika ny fahombiazan'ny mpanjifa ao Pushwoosh. Izy dia manome alalana ny mpanjifa SMB sy Enterprise hanatsara ny tetikasan'izy ireo amin'ny marketing automatique ho an'ny fitazonana sy fidiram-bola avo kokoa.
Fomba fampiasana Font Awesome amin'ny Illustrator sy fampiharana hafa